फेरि बढ्यो सुनको भाउ, प्रतितोला कति पुग्यो ?
निशान न्युज कार्तिक २५, 2076
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । शुक्रबार केही घटेको सुनको मूल्य आइतबार र सोमबार पुनः उकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २०० ले वृद्धि भएको छ । महासङ्घले सोमबारका लागि छापावाल सुनको ...
आरालो लाग्न थाल्यो नेप्से परिसुचक, ०....
कार्तिक १९, 2076 काठमाडौं । नेप्से परिसूचक आज पुनः ओरालो लागेको छ । सोमबार झिनो अङ्कले बढेको परिसूचक आज भने सोही लयमा घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ०.८१ विन्दुले घटेर एक हजार १३९.४५ मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ...
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श...
कार्तिक १८, 2076 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । श्रेष्ठ २०७२ फागुनमा नेपाली कांग्रेस कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । समितिले प...
सात अंकले घट्यो शेयर कारोवार
कार्तिक १७, 2076 काठमाडौं । साताको पहलिो दिन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै सात अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ६.८८ विन्दुले घटेर एक हजार १३९.२९ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत...
जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रियो हालसम्मक...
कार्तिक १५, 2076 काठमाडौं । जलविद्युत परियोजनाका लागि हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्झौता भएको छ । माथिल्लो त्रिशूली –१ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि शुक्रबार वित्तीय सम्झौता भएको छ । माथिल्लो त्रिशूली १ मा कोरियन लगानीको न...
कार्तिक १५, 2076 काठमाडौं । बिहीबार घटेको सुनको मुल्य शुक्रबार बढेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको छ । तेजाबी सुन ७० हजार ९ सयमा कारोबार भएको छ । चाँदी तोलमा ८ सय ७० कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्याव...
१५ अर्बमा अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन व...
कार्तिक ९, 2076 अमलेखगंज । मोतिहारी–अमलेखगंज अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन विस्तार सम्पन्नपश्चात उत्साही बनेको नेपाल आयल निगमले अर्को दुई महत्वपूर्ण आयोजना अघि सारेको छ । निगमले मोतीहारी अमलेखगन्ज ग्यास पाइपलाइनलाई चितवन (लोथर) सम्म बिस्तार ...
मर्ज भयो दुई ठूला बैंक, एकीकृत कारोवा...
कार्तिक ९, 2076 काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल मर्ज भएका छन् । दुवै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिपछि एकीकृतरुपमा कारोबार सुरु गर्नेछन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमका बीच मर्जरसम्बन्धी सम्झौता पत्र...
६ सयले बढ्यो सुनको भाउ
कार्तिक ८, 2076 काठमाडौं । फेरि सुन तोलामा ६ सय बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला ७० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको सुन भाउ घटेर आज ७१ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । केही दिनयतादेखि सुनको मूल्यले नयाँ रेडर्क बनाउँदै अघि बढेको थियो । प्रतित...
डुइङ बिजनेसमा १६ स्थान सुधार, नेपाल व...
कार्तिक ८, 2076 काठमाडौं । नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरणमा गत वर्षभन्दा निकै सुधार भएको छ । विश्व बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०२०’ मा नेपाल १९० देशमध्ये १६ स्थानले सुधार गर्दै यस वर्ष ९४औँ स्थ...
नेप्सेमा ११ दशमलव ३३ अंकको सुधार, बिह...
कार्तिक ७, 2076 काठमाडौं । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ११ दशमलव ३३ अंकको सुधार देखिएको छ। सातामा कारोबारको पहिलो दिन १ हजार १ सय ३८ दशमलव ०१ को बिन्दूमा रहेको नेप्से परिसूचक बिहीबारसम्म आइपुग्दा १ हजार १ सय ४९ दशमलव ३४ अंक का...
रुकुममा सिस्नुको पाउडर उद्योग सञ्चालन
कार्तिक ४, 2076 काठमाडौँ । रुकुम (पश्चिम), कात्तिक ४ गते । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा सिस्नुको पाउडर उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीय स्तरमा खेर गैरहेको अर्गानिक सिस्नुलाई पाउडर बनाएर बाहिर निर्यात गर्न मुसिकोट नगरपालिका –५ ...
बाला नलाग्दा तीन करोड क्षति
कार्तिक २, 2076 काठमाडौँ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा गरिएको गरिमा (वर्णशङ्कर) र सिन्दुरी खुला सेचित जातको धान खेतीमा बाला नलाग्दा झण्डै रु तीन करोड मूल्य बराबरको क्षति पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रा...
आश्विन २९, 2076 काठमाडौँ । निकै उतार चढावका बीच कारोबार हुँदै आएको सुनको मूल्य नेपाली बजरामा आज प्रतितोलामा रु १०० कम भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७० हजार ६०० कायम भएको छ । मङ्गलब...
आश्विन १७, 2076 काठमाडौं । साउदी अरबको तेल प्रशोधन केन्द्रमा हुथी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । तर, वृद्धि दशैंपछि मात्र गरिने बुझिएको छ । दशैंको मुखमा मूल्यवृद्धि गर्दा...
← अघिल्लो 1234567 89… 67 68 पछिल्लो →
गर्भवती महिलाले यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ की मिल्दैन ? यो जानी राखौं